Maxkamad Dil ku xukuntay Ex-madaxweyne Donald Trump & Amiir Maxamed Bin Salmaanka sacuudiga+Sababta | Qaran News
Maxkamad Dil ku xukuntay Ex-madaxweyne Donald Trump & Amiir Maxamed Bin Salmaanka sacuudiga+Sababta
Writen by Qaran News | 11:10 am 23rd Sep, 2021
Qaramada Midoobay, Mareyknaka iyo Ingiriiska ayaa si kala gooni gooni ah u cambaareeyay dilal noocaas ah oo lagu fuliyay gudaha dalka Yemen.
Mid ka mid ah dadka la dilay ayaa ahaa wiil isagoo aan qaan gaarin gacanta lagu dhigay. Sagaalka qof oo dilkooda uu ka dhacay fagaare ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Sanca ayaa la sheegay in lagu helay dambi ku saabsan inay qorsheeyeen fal sanadkii 2018-kii lagu dilay hoggaamiye sare oo ka tirsanaa Xuutiyiinta.
Ninkaas ayaa ku dhintay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga Carabiga. Xuutiyiinta ayaase aaminsan in ragga la xukumay ay “cadowga” u gudbiyeen xog muhiim ah oo horseedday in Salih al-Samad iyo lix qof oo kale lagu bartilmaameedsado duqeynta.
Sawirro iyo muuqaallo laga soo duubay Yemen oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in sagaalka qof lagu dilay goob ay xaadir ku ahaayeen dadweyne badan.
Mas’uuliyiinta Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xukunnadaas aan la waafajinin xeerarka caalamiga ah. Midowga Yurub ayaa ku baaqay in cunaqabateyn adag lagu soo rogo Xuutiyiinta.
Yemen ayaa dagaal ku jirtay tan iyo sanadkii 2015-kii. Qalalaasaha ayaa billowday kaddib markii fallaagada Xuutiyiinta ay la wareegeen maamulka inta badan dalkaas.
Kaddib markii ay kacdoonka sameeyeen Xuutiyiinta, ciidamo shisheeye oo ay horkacayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa weerar ku qaaday Yemen si ay dib ugu soo celiyaan dowladdii ka jirtay dalkaas, howlgalkoodana waxa uu sababay dhimashada kumannaan qof oo rayid ah.
Dad tiradooda lagu qiyaasay 130,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka uu Sacuudiga hoggaaminayo ee ka socda dalka Yemen. In ka badan shan milyan oo qof ayaa halis ugu jira inay gaajo daran u dhintaan.
Meelaha qaar waxaa adag in la geeyo gargaarka bani’aadannimo ee isugu jira cunnada iyo biyaha iyo sidoo kale kaalmada caafimaad ee ay dadka ugu baahan yihiin sida ugu dhakhsiyaha badan.
Wali lama gaarin ujeeddada gulufkii dagaal ee ay xulafada Sacuudiga ku qaadeen dalka Yemen, hase yeeshee waxaa dalkaas gaaray burbur aad u weyn. Colaadda waxaa ku burburay isbitaallo, iskuullo iyo warshado badan oo qayb ka ahaa kaabeyaasha dhaqaalaha.
Qaramada Midoobay ayaa xaaladda ka taagan Yemen ku qeexday xasaradda ugu xun ee bani’aadannimo ee ka taagan caalamka, iyadoo in ka badan kalabar ka mid ah isbitaallada ay burbureen ama albaabbada la isugu dhuftay.